गुगलमा यस्ता कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ ? - शुभयुग
गुगलमा यस्ता कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ ?
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख १३, सोमबार (१ हफ्ता अघि)
१३ बैशाख,काठमाण्डौ – अहिलको समयमा हामी कुनै पनि कुराको बारेमा जानकारी लिनका लागि गुगलको प्रयोग गर्दछौं । किनभने हामीले खोज्न चाहेका विषयवस्तु सहजै फेला पार्न सकिन्छ । तर कतिपय समय हामी गुगलमा यस्ता कुराहरु सर्च गर्छौं, जसका कारण अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छौं ।
गुगलमा औषधिको नाम सर्च नगर्नुहोस् :
यदि तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन र आफ्नो लक्षणको आधारमा कुन रोगको संक्रमण छ भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ । अनि यससँगै उक्त रोगबाट निको हुन आवश्यक औषधी पनि खोज्नुहुन्छ । तर भुलेर पनि यस्ता काम नगर्नुहोस् । गलत औषधिको सेवनले तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था झन् बिग्रिन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य अवस्था खराब भएको छ भने गुगल सर्च होइन, बर तुरुन्त डक्टरकहाँ जानुहोस् ।
बम बनाउने तरिका :
गुगलबाट सोझै मोबाइल एप डाउनलोड नगर्नुहोस् :
हामी कुनै एप प्लेस्टोर वा एप्पल एप स्टोरबाट डाउनलोड नगरेर त्यसलाई गुगलमा सर्च गर्दछौं । यसो गर्दा कतिपय समय फर्जी एपहरु डाउनलोड गर्न पुग्दछौं । जसले हाम्रो डिभाइसलाई हानी पुर्‍याउनुका साथै हाम्रो फोनमा रहेको डेटा समेत चोरी गर्दछन् । त्यसैले गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पल एप स्टोरबाट मात्रै एप डाउनलोड गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
निजी ईमेल गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् :
कस्टमर केयर नम्बर :
हामी कुनै न कुनै उत्पादन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं । त्यसमा कुनै किसिमको समस्या आउँदा कस्टमर केयरलाई कल गर्ने विषयमा सोच्न थाल्छौं । कतिपय समय हामीलाई सम्बन्धित कस्टमर केयरको नम्बर थाहा हुँदैन । यस्तोमा गुगलको सहारा लिन थाल्दछौं । तर यसरी गुगलमा कस्टमर केयरको नम्बर सर्च गर्नु पनि तपाईंका लागि भारी पर्न सक्दछ । साइबर अपराधलाई बढावा दिने ह्याकरहरुले कुनै पनि कम्पनीको फेक वा फर्जी हेल्पलाइन नम्बर गुगल सर्चमा फ्लोड गरिदिन सक्छन् ।
यस्तोमा जब तपाईं उक्त नम्बरमा कल गर्नुहुन्छ, तब तपाईंको नम्बर ह्याकरकहाँ पुग्दछ । त्यसपछि ह्याकरले तपाईंको नम्बरमा कल गरेर कुनै प्रकारको साइबर अपराध गर्न सक्छन् । यसमा सिम स्वाप जस्ता घटनाको जोखिम रहन्छ । त्यसैले कस्टमर केयरका लागि आधिकारिक वेबसाइटमा गएर नम्बर यकिन गर्नुहोला ।
पोर्नाेग्राफी सम्बन्धी सर्च :
फ्री एन्टिभाइरस तथा सफ्टवेयर सर्च नगर्नुहोस् :
गुगलमा एन्टिभाइरस तथा सफ्टवेयर सर्च गर्ने काम सकेसम्म नगरेकै राम्रो । फ्री सफ्टवेयरको नाममा त्यहाँ तपाईंले अनेक विकल्प देख्न सक्नुहुन्छ । तर कुन सक्कली कुन नक्कली भन्ने कुरा छुट्याउन निकै मुस्किल हुन्छ । ह्याकरहरुले नक्कली सफ्टवेयर तथा एप राखेका हुन्छन् । यदि तपाईंले त्यस्ता सफ्टवेयर तथा एप डाउनलोड गर्न पुग्नु भयो भने तपाईं ह्याकर तथा साइबर अपराधीको जालमा पर्न सक्नुहुन्छ ।